चर्चित गायिका मिलन नेवार, यस्ता छन् रोचक जानकारी । – Sandes Post
April 13, 2022 433
केही समय अगाडी सांगीतिक बजारमा ‘फूलबुट्टे सारी’ गीत निकै चर्चित बन्यो । जुन गीतको गायका थिईन् मिलन नेवार । गायिका मिलन नेवारले गाएको ‘फूलबट्टे सारी’ गीत सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’लगायतमा भाइरल बन्यो । छोटो समयमै यु–ट्युबमा करोड क्लवमा पनि प्रवेश गर्यो । गीत संगै उनी पनि चर्चित बनिन् ।
मिलनले नै गाएको ‘गाला रातै’ गीतले पनि निकै चर्चा कमाएको थियो तर गित जति चर्चा उनको हुन सकेको थिएन । यघपि यो गित गाउदा मिलन नेपाली पार्श्व गायनको शीर्ष स्थानमा थिइन् । उनको उदय त्यही मोडमा भएको थियो, जतिबेला पारिवारिक झमेलाका कारण अर्की गायिका अन्जु पन्त सुस्ताएकी थिइन् ।
भन्नेहरु भन्थे, ‘मिलनले अन्जुको ठाउँ खोस्यो ।’ मिलन भने कसैको ठाउँ ओगट्ने नभई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न लागिपरेको बताउँथिन् । जे भएपनि, त्यो उनको समय थियो । उनका लागि सरस्वती दाहिना थिइन्, पार्श्व गायनमा एकछत्र राज थियो ।
भ्वाइस अफ किड्सको यात्रा – मिलन आफुलाई निकै अगाडि बढाईन । चर्चित रियालिटी शो को जज समेत बनिन् । कोचको रुपमा उनलाई धेरै दर्शक तथा स्रोतले रुचाए । सुमधुर स्वर र कोच रुपमा निभाएको भुमिकाको कारण झनै सुगन्ध थपिदियो ।
बिबाह र डिभोर्स –
२०७४ साल असोज २ गते । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा गायिका मिलन अमात्यको डिभोर्सको समाचार छ्यापछ्याप्ती भए । मिलन अमात्य र मेन्सन अमात्यले सोही दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेर पारपाचुके गरेका थिए ।
विवाहको योजना ! –
डिभोर्सपछि मिलन एक्लो जीवन बिताइरहेकी छिन् । उनी आफू अहिले प्रेममा पनि नभएको बताउँछिन् । तर विवाह गर्ने सोचमा छिन् । ‘अहिले म बुढी भइसकेकी छैन नि,’ ठट्यौली शैलीमा उनले भनिन्, ‘विवाह त पक्कै गर्नेछु, तर कहिले गर्छु भन्ने योजना बनाइसकेको छैन ।’
मिलनको नेपाल प्रवेश – आसाममा जन्मिएकी मिलनको परिवार संगीतिक थियो । उनका मामा कृष्ण मिजाल र ठुलीआमा डुकुना नेवार आसामको सांगीतिक आकाशमा सफल थिए । उनीहरुको छत्रछायामा हुर्केकी मिलनले १३ वर्षको उमेरमा स्टेजमा गाउन थालिन् ।
चलचित्र नोटबुकको ‘गाला रातै’ र कालीको ‘बट स्लोली स्लोली’ गीतले उनलाई स्थापित नै गरायो । ‘यति छोटो समयमा नै सफल हुन्छु भन्ने सोचेको थिइनँ,’ उनी भन्छिन् ।
गायनसँगै मिलनले केही आफ्ना गीतको भिडियोमा मोडलिङ पनि गरेकी छन् । ‘सानैदेखि मोडलिङमा पनि रहर थियो । त्यही रहर पूरा गर्न केही भिडियोमा देखिएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर अरुको गीतमा मोडलिङ गर्ने योजना भने छैन ।’
भारत आसामकी गायिका मिलन नेवार गायनको कर्मभूमि बनाउन नेपाल छिरिन्, नेपालीको मन पनि जितिन् । नेपालीमूलका धेरै भारतीय नागरिकले आफ्नो कलाको कर्मस्थल नेपाललाई बनाएका छन् ।
Prevआहा ! नेपाली संस्कारमै यसरी गरियो अमेरि`कन बेहुला र नेपाली छोरिको बिवाह (हेर्नु`स् भिडियो )
Nextचर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, यस्ता छन् रोचक जानकारी ।
एउटै बाइकमा सवार चार जनाको ज्यान गयो, अर्का भाग्यले बाचे !